Janoary 2018 | Save A Train
Month: Janoary 2018
Home > Janoary 2018
Italia, iray amin'ireo malaza indrindra Eoropa vakansy toerana, izany rehetra izany dia manana. Ny manan-karena ara-kolontsaina tantara, tarehy trano fandraisam-bahiny, izao tontolo izao-malaza nahandro, maritrano, toerana voajanahary tsara tarehy ... ary avy eo misy fiantsenana! Nankany Italia lamasinina dia mahatalanjona traikefa. Mahazo hankafy tsara tarehy rehetra ny toerana manodidina…
Nandeha manodidina Eoropa ny fiarandalamby dia longstanding fomban-drazana izay tsy handeha maika – Fiaran-dalamby no haingana indrindra, indrindra Eco-namana sy ny fomba mahomby indrindra ny fifindrana avy amin'ny toerana. Na dia rafitra ny lamasinina tapakila maka ny fanaintainana amin'ny fandaminana…
Lalamby fitaterana no tena fomba tontolo iainana-namana mba handeha. Ny vokatry ny entona mandatsa-dranomaso entona isaky ny kilometatra eo amin'ny lalamby fitaterana dia 80% latsaky ny fiara. Any amin'ny tany sasany, latsaky ny 3% rehetra fitaterana famoahana entona mandatsa-dranomaso avy amin'ny fiaran-dalamby. The only methods more environmentally friendly…
Traveling ny firenena, na ny tanàna, dia tena mahavariana sy ny traikefa voyaging lamasinina no iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba hanao izany. Eoropa lamasinina manjo dia mifototra betsaka amin'ny nandeha lavitra, na izany aza, Eoropa maro ireo orinasa lalamby ankehitriny nifindra…
Lamasinina nandehanany any Italia tsy manolotra fampiononana fa ny sasany mahavariana hevitra. Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny nandray ny fiaran-dalamby tany Italia no afaka mijery ny toerana manodidina tsara tarehy rehefa mandeha amin'ny toerana iray hafa. Amin'ny faritra sasany ao Italia,…